फेसबुकमा १६ जिबी अश्लील डाटा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
फेसबुकमा १६ जिबी अश्लील डाटा
बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ०७:१० मा प्रकाशित !
काठमाडौं- प्रहरीले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दै अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न एक व्यक्तिको फेसबुक एकाउन्टभित्र १६ जिबी अश्लील डाटा फेला पारेको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिले अश्लील र छद्मनाममा खोलेको फेसबुक पेजमा आवाज, दृश्य र शब्दको ठूलो भण्डार जम्मा गरेका थिए। महानगरीय अपराध महाशाखाको हिरासतमा रहेका ललितपुरका सुरज बस्नेतले खोलेको उच्चारणसमेत गर्न नमिल्ने पेजमा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीसम्मले साटासाट गरेका तस्बिर, भिडियो र वार्तालापको भण्डार फेला परेको छ।
महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्यले एउटा निजी कम्पनीमा लेखापालको जागिरे रहेका बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्री भण्डारण गरेको पाइएको बताए। उनका अनुसार महाशाखामा रहेको साइबर सेलले बस्नेतको पेजबाट ठूलो मात्रामा व्यक्तिका गोप्य र अति गोप्य सामग्री बरामद गरेको हो। पेजको प्रकृति, प्रयोगको विवरण र सञ्जालका सदस्यको वार्तालापले अश्लील सामग्रीको व्यवसाय सञ्चालन भएको हो कि भन्ने आशंका छ, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं, एसएसपी अमात्यले भने।
पेज खोज्दै जाँदा बस्नेत फेला परे, केही समय अमेरिका बसेका उनले उतै यस्तो धन्दा सिकेको प्रारम्भिक बयानमा बताएका छन्,महाशाखाका एसपी प्रकाशजंग कार्कीले भने। उनले डिसेम्बर, २०१६ मा खोलेको पेजमा पाँच सयभन्दा बढी सदस्य छन्। पेजमा यौन क्रियाकलापका लागि युवती र युवकको विज्ञापन गरिएको छ। व्यक्तिका नम्बर यौनकर्मीका रूपमा सार्वजनिक गरिएका छन्।
भेटघाटमा आउने सबैलाई हामी चिन्दैनौं, उसको व्यापार-संलग्नता थाहा हुँदैन, फोटो खिच्छन्, पछि व्यक्ति गलत भए वृत्ति विकासमै असर पुग्ने सामग्री बन्छ, एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले भने।
प्रहरीजस्तै निजामती कर्मचारी, कलाकार र सार्वजनिक महत्व बोकेका व्यक्ति यसबाट पीडित छन्। महाशाखाले सार्वजनिक नगरी अनुसन्धान टुंज्ञ्ाएका धेरै घटना यस्तै उच्च व्यक्तिसँग जोडिएका हुन्छन्।
पछिल्लो समय साइबर अपराधबाट पीडित हुनेमा गृहिणी र मध्यस्तरका कामकाजी महिला छन्,एसएसपी अमात्यले भने। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालले बनाएका नियमविपरीत आफूखुसी प्रयोग गर्ने र प्रयोग हुने ठूलो समस्या छ।
महाशाखाको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको फागुन ३ सम्ममा ६ सय ५७ साइबर क्राइमका उजुरी दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या ८ सय ३० थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा तीन सय ११ घटनाका उजुरीउपर महाशाखाले छानबिन गरेको थियो।
PREVIOUS POST Previous post: पुलको मुख्य लट्ठा राख्ने काम सुरु हुन सकेन
NEXT POST Next post: राप्रपामा १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ०७:१०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ०७:१०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ०७:१०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ०७:१०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ०७:१०